Aroos soomaaliyeed oo 84 sano ka hor ka dhacay Jarmalka (Sawir) - Calanka.com
Aroos soomaaliyeed oo 84 sano ka hor ka dhacay Jarmalka (Sawir) (Calanka.com) - Posted at 04/12/2012 By Admin
Inteenii aqrisatay asbuucii hore waxa aan soo qaadanay dhacdo qabsatay Soomaali degeneed magaalada Berlin ee Jarmalka sanadii 1910-kii oo aynu haatan ka joogno in kabadan 100 sano.
Dulucda sheekadu waxa ay eheyd in Sooomaali badan ku noolaayeen halkaas oo weliba shukaansi ay samaynayeen dhallinyaro Soomaaliyeed ay sababtay in xaafaddii Soomaalidu ka deganaayeen Berlin hal maalin ay xireen boolisku si loo hakiyo buuqa iyo falceliska Soomaalida ay ka samayn lahaayeen arrinkaa qabsaday.
Haddaba asbuucaan waxa aynu ku madalsanayn in aynu wada aqrisano aroos ka dhacay isla Berlin sanadii 05-09- 1928.
Sheekada arooska waxa boggiisa 4aad ku daabacay joornaalka “Amersfoortsch Dagblad” oo ka soo bixi jiray xilligaas magaalada Amersfoort ee waddanka Holland isagoo cinwaan uga dhigay “ Aroos Soomalaiyeed oo ka dhacay Berlin”.
Wargeysku waxaa uu sheegay sida uu ka soo xigtay madaxii xadiiqada xayawaanka( Dierentuin) ee magaalada Berlin in arooska lagu soo bandhigay , oo uu weliba ka dhacay xadiiqada gudaheeda isla markaana ay joogeen dad badan oo soomali ah oo weliba ku lebisan dharkii hidaha iyo dhaqanka soomalidu ab iyo isir u lahaan jirtay sidaba uu wargaysu ku soo bandhigay sawir laga soo qaaday arooska. Joornaalku waxa uu intaa raaciyey in caruusaddii oo gebi ahaanba asturan oo qarsoon ay soo aaday meeshii uu ku sugnaa caruusku.
Runtii markii si dhab ah u fiirisid muuqaalka laga soo qaaday arooskaas waxa kuu muuqanaya faras, dumar Soomaliyeed oo mid ka mid ah u egtahay hooyada, mid ka mid ah 2-da is aroostay iyo weliba qof ay iila ekaatay in uu ahaa caruuskii oo ay ka muuqatay kalsooni iyo dhiiranaan inkastoo la iiga fiicanyahay sawir aqrinta haddana aqristayaasha ayaan u daynayaa wixii ay kala soo dhex bixi karaan sawirka iyo muuqaalka wargeyska lagu soo bandhigay 1928-dii oo aynu haatan ka joogno 84 sano, laga yaabee caruurtii ay kala heleen in qaarkood noolyihiin oo ay daaha nooga qaadaan qaabka wax u dheceen iyo sida waalidkood meesha ku soo gaareen iyo weliba soomaalidii kale oo halkaa kula nooleed. Waa inoo asbuuca danbe iyo salaadiintii reer Luuq waraaq ay u qoreen talyaaniga hal qarni ka hor in shaa allah.